(Redirected from Bambo)
Nedzimwe nguva tinohwa kuchinzi baba kubvira vatete. Iyi ihazvanzi yababa inenge ichinemegwa kunzi inogona kutora chinzvimbo chababa pavanenge ivo baba vasipo nemababamunini nemababamukuru. Iyi itsika inototatamugwa kwazvo pane dzimwe nguva kuti ibate nyangwe muzukuru chaiye mwana wehazvanzi yababa kuti amire pachinzvimbo chababa mumabasa echiKaranga. Asi hazvizoiti hazvo kuzodana zita rokuti baba kumuzukuru nokuti iye pachake ane chinzvimbo chakwe somuzukuru. Zvino vazukuru vazhinji vapera kubhinya vakadzi vemadzisekuru vachiti he-e ndiri baba, he-e uri mukadzi wenhaka chakuti chakuti. Nhaivo vakadzivo kunyanya vechiZezuru vava kutozvidavo unohwa voti babamudiki kubvira muzukuru kutsvaka kuzobhinywa naye.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Baba&oldid=75296"
This page was last edited on 6 Chikumi 2020, at 14:14.